मेस्सीको सफल फ्री किक पछाडीको रहस्य र रिति के छ ?? के ह्याट्रिक पछि मेस्सीलाई चोट लागेको थियो ? - Experience Best News from Nepal
१शारीरिक सम्पर्क गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह
२बलिउड सुपरस्टार आमिर खानकी छोरीको यस्तो हर्कत !! सामाजिक संजालमा भाइरल
३रोनाल्डो म्यानचेस्टर युनाइटेड जाने ?
४मड्रिडका यी १० खेलाडी जसले क्रिस्टियानो रोनाल्डो कै कारण मड्रिड छाडे !!
५च्याम्पियन लिग अन्तिम १६ मा यी ४ प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्छन आम्नेसाम्ने !!
६बालोन डी’ओर वितरण समारोहमा मेस्सीलाई बोलाइदै !! के नतिजा बाहिरिएकै हो ?
७सनले गरेको त्यो गोल मेस्सी र म्यारोडोनासंग हुदै छ तुलना !! भिडियोमा हेर्नुहोस यस्तो थियो त्यो गोल !!
८शारीरिक सम्पर्क गर्दा पुरूषलाई भन्दा महिलालाई किन बढी फाइदा हुन्छ ! कसरि ?
मेस्सीको सफल फ्री किक पछाडीको रहस्य र रिति के छ ?? के ह्याट्रिक पछि मेस्सीलाई चोट लागेको थियो ?
ला लिगा खेल बार्सिलोना विरुद्ध सेल्टा भिगोको भिडन्तमा मेस्सीले ह्याट्रिक गोल गारेका थिए, जसमा २ फ्री किक समाबेश थियो । बार्सिलोनाको ४-१ को जितमा मेस्सीले १ पेनाल्टी र २ फ्री किक मार्फत गोल गरेका थिए । बार्सा बल्ग्रानाले एक लेख सर्वाजनिक गरेको थियो जसमा मेस्सीको उक्त फ्रि किकलाई नजिकबाट अवालोकन गरिएको थियो । त्यहाँ लेखिएको थियो मेस्सीको फ्री किक क्यामेरामा त् प्रष्ट थियो तर उक्त सफल फ्री किकमा केहि रोचक पक्ष फेला परेको थियो ।
एक भिडियोमा मेस्सीले फ्री किक र खेल दौरान केहि रोचक क्रियाकलाप गर्दै थिए : भिडियो यस लिंकमा छ:
A closer look at Messi's free kicks from El Dia Despues. Interesting that he tries to get rid of all the spray on the ground. Also he was touching his legs, wonder if it did hurt or not.pic.twitter.com/LIyfcuHdtH
— Luis Mazariegos (@luism8989) November 12, 2019
पहिला मेस्सीको सफल फ्री किक पछाडी के छ त्यो हेरौ:
हर पटक मेस्सी बललाई लिने र सही स्थानको मापन गर्ने गर्दछन, कहिले काहिँ हामी देख्छौ मेस्सी बललाई अगाडी पछाडी गर्दछन् र साथै बल पुछ्ने या मैदानमा नै बल रगड़ने गरेको देखिछ सायद उक्त पछाडी मेस्सी बलमा लागेको रेफ्रीले प्रयोग गर्ने स्प्रेबाट वन्चित हुन चाहान्छन । सायद उक्त मास्टर पछाडी बलले जन्मिनमा धेरै जोड नलियोस अर्थात् मास्टर मेस्सीले उक्त जाचमा आफ्नो केहि बैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेका छन ।
तर मेस्सीले आफ्नो खुट्टालाई छाम्ने या सुम्सुम्याउने गरेको दृश्य उक्ता भिडियो मार्फत प्रष्ट देखिएको थियो, सायद दुखाईका कारण नै उनले त्यसो गरेको हुनुपर्छ । तर मेस्सीले ९० औ मिनेटको खेल भने पूर्ण खेलेका थिए के यस पछाडी केहि रहस्य छ । मेस्सीले अर्जेन्टिनाबाट अर्को खेल खेल्न नसक्ने उक्त अनलाइनको ठहर रहेको छ । भिडियोमा मेस्सीको हातमा समेत समस्या रहेको बताइएको छ । उक्त भिडियोमा नियाल्ने हो भने अजिव मेस्सीको क्रियाकलाप देख्न सकिन्छ ।
—यो barcablaugranes को अनुवादित लेख हो !!
रोनाल्डिन्हो भन्छन मेस्सी सदावहार उत्कृस्ट खेलाडी होइनन् !! मेस्सीको तुलना पेले, रोनाल्डो र म्यारोडोनासंग ?
मेस्सी रहित च्याम्पियन लिग फाटी र पेरेजको गोलमा मिलान समुह चरणबाटै बाहिरियो !!
मेस्सी फुटबलमा एक नाम : रेकर्डको भण्डार !!
सनले गरेको त्यो गोल मेस्सी र म्यारोडोनासंग हुदै छ तुलना !! भिडियोमा हेर्नुहोस यस्तो थियो त्यो गोल !!
रोनाल्डोको २ गोलमा युभेन्ट्सको सहज जित !! मिलानको खेल अगाबै युभेन्ट्स शिर्ष स्थानमा !!
लगातार चौथो खेलमा रोनाल्डोको गोल !! हाफ अघि नै रोनाल्डोको २ गोल !! युभेन्ट्स ३ गोलले अग्रता
यी ५ क्षणहरु जुन रोनाल्डोको यस दशक कै ठुलो क्षण बन्न पुग्यो !!
टाइटल होडमा लिभरपूल, सलाहको २ गोलमा वार्टफर्ड माथि जित !!
इलियानाको यस्ता तस्बिर बाहिरएपछी बलिउडमा मचियो हंगामा !! हेर्नुहोस तस्बिर
सुनको भाउ बढ्यो ! कति छ त आज
सामाजिक संजाल फेसबुकमा करिश्मा यस कारण भड्किन !!
पाकिस्तानी गायिकाको नग्न तस्बिर र भिडियो लिक भयो !! भिडियो युट्युबमा भाइरल